श्रावण १६, २०७७ | पूर्ण पी राई
२०६९ को मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास दमिनी भीर का लेखक राजन मुकारुङ हरेक भेटमा दोह¥याउँछन्, “शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई सपना देख्न सिकाउनुपर्छ ।” शिक्षणबाटै ‘करियर’ शुरू गरेका मुकारुङले कति विद्यार्थीलाई कस्ता कस्ता सपना देख्न कसरी सिकाए; उनी र उनले सपना देख्न सिकाएका विद्यार्थीलाई नै थाहा होला । उनको भनाइले ठूलै सैद्धान्तिक–दार्शनिक अर्थ राख्छ । तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु कठिन रहेछ ।
मलाई दशैंमा टीका थाप्दा ‘मलायाको लाहुरे हुनू, लप्टन, कप्तान हुनू’ भनेर आशीर्वाद दिन्थे अग्रजहरू । मानौं; राई, लिम्बू, मगर र गुरुङ हुनु भनेकै बेलायत, भारतको सेनामा सेवा गर्र्नू, देश–विदेश घुम्नु र बहादुरीका साथ लड्नका लागि मात्र हुन् ।
बूढा लाहुरेहरू दोस्रो विश्वयुद्ध र मलाया युद्धका संस्मरणहरू सुनाउँथे । रमाइलो लाग्थ्यो । दौंतरीहरू लाहुरे हुनलाई जीउ बनाउन थालिहाल्थे, जुँगाको रेखी बस्नु अगाडिदेखि नै । उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता बेलायत, दोस्रोेमा भारत र केही नचलेपछि नेपालको सेना हुने गर्दथ्यो । तर मैले लाहुरे हुने सपना कहिल्यै देखिनँ ।
एक पटक गाउँमा खैरा लुगा र राता टोपी लाएका दुई जना पुलिस आएका थिए– हबल्दार र सिपाही । हाम्रै घरमा बास बसे ।
साहिंला दाइलाई भाले र रक्सी गाउँबाट ओसार्दाको हैरान । खाने दुई जना, सिंगासिंगै भाले र दुई पाथी रक्सीले नपुगेको ।
उल्टो तिनै, घरकालाई हप्काउँछन्– मासु र रक्सीले पुगेन भनेर । पञ्चायती व्यवस्था थियो । आक्कलझ्ुक्कल गाउँ पुग्ने पुलिस राम्रै धीत मारेर फर्किन्थे । त्यतिबेला ‘पुलिस भए सित्तैंमा टन्न खान पाइने रहेछ, मान्छे हप्काउन पनि पाइने रहेछ’ भन्ने मेरो दिमागमा घुसेको भए म पुलिस हुने सपना देख्थें होला । पुलिसले ठग्दोरहेछ भन्ने लाग्यो । चकचक गरेको बेला रोक्नलाई ‘पुलिसले लैजाला’ वा ‘पुलिस बोलाइ दिऊँ’ भनेर घरगाउँका ठूलाले केटाकेटी तर्साउन प्रयोग गर्ने वाक्यांशले पनि मलाई पुलिस हुने सपना देख्नबाट विमुख गराए होलान् ।
पूmल हेर्दा काँडा देखें
सपना देख्ने कुरा सापेक्षिक हुँदोरहेछ । दोस्रो विश्वयुद्ध हाँक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति थिओडर रुजबेल्टले सपनाको सापेक्षताबारे भने, “सपना दर्जनौं छन् तर त्यसलाई व्यवहारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने वास्तविकता माथि सोच्नु महŒवपूर्ण छ ।” जन्मँदाको वातावरण, संस्कार र संस्कृतिले व्यक्तिको सपना निर्धारण गर्छ । एक व्यक्तिले देख्न सक्ने सपनाहरू दर्जनौं भए पनि ती संस्कार, संस्कृति र परम्पराकै वरिपरि घुम्छन् । कति मान्छेहरू सपनाले सफल हुन्छन्, कति परम्पराले । कुनै पनि व्यवहार लामो समयसम्म एकदेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने क्रम निरन्तर भएपछि त्यो संस्कार, संस्कृति र परम्परा बन्छ ।
सोलुका शेर्पालाई हिमाल केही पनि हैन । हिमालको टुप्पोमा उनीहरूलाई सपनाले हैन परम्परा र पेशाले पु¥याउँछ ।
संसारभरिबाट आरोहीहरूलाई सगरमाथातिर सपनाले डो¥याउँछ । विराटनगरका कति मान्छेलाई भेडेटारै हिमाल जस्तो लाग्ला । मच्छड र गर्मीले आजित बनाउन थालेपछि उनीहरू भेडेटार पुग्ने सपना देख्न थाल्छन् र पुगेको दिन संसार जितेको महसूस गर्छन्, हिलारी र तेन्जिङले सगरमाथाको टुप्पो टेके जस्तो । नेपालको मान्छे समुद्र हेर्न पाए स्वर्ग पुगेको अनुभव गर्छ; उता माल्दिभ्सका मान्छेलाई देशै समुद्रमा डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
खोटाङ जिल्लामा दुइटा गाउँ छन् निकै चर्चित । एउटा पश्चिमी क्षेत्रको खार्पा र अर्को सदरमुकाम दिक्तेलको आचार्य गाउँ ।
खार्पाको हरेक पोखरेल र आचार्य गाउँको हरेक आचार्य निजामती सेवामा जागिर खाने सपना देख्छ । सके आफू नसके आफ्ना छोराछोरी निजामती कर्मचारी भएको देख्न चाहन्छन् । त्यहाँ निजामती सेवामा कोही न कोही नभएको घरपरिवार लगभग छैन । २०५० को दशकमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव मात्रै नौ जना खार्पाली थिए । एउटै गाउँका, एउटै वंशका । आचार्य गाउँमा नायव सुब्बा र खरिदार नभएको घर विरलै होलान् ।
डेभिट जे श्वार्टज द म्याजिक अफ थिंकिङ बिग किताबमा लेख्छन्, “सपना देख्नु भनेको रचनात्मक सोच बनाउनु हो ।
परम्परागत विचारलाई परास्त गर्नु हो ।” लाक्पा शेर्पाले सगरमाथा चढ्नु र अर्विन तिम्सिनाले सगरमाथा चढ्नु फरक कुरा हुन् । गन्तव्य उही हो, त्यहाँ अघिल्लालाई परम्पराले पु¥यायो, पछिल्लालाई सपनाले पु¥यायो । हरिभक्त कटुवालले रहर कवितामा भनेजस्तो ‘बनिबनाउ बाटोमा हिंड्नु हैन आफैं नयाँ बाटो बनाउँदै हिंड्ने प्रयत्न गर्नु’ सपना देख्नु हो ।
मध्यपश्चिमका पहाडमा काठका कोसी (सानो आरी) बनाउँदै रमाउने राउटेले बढीमा कबिलाको मुखिया हुने सपना देख्ला ।
एउटा भिखारीले एक थाल भातको सपना देख्ला । एउटा सुकुम्बासीले दुई आनाको लालपुर्जा पाउने सपना देख्ला । एउटा खलासीले ड्राइभर बन्ने सपना देख्ला । मकवानपुरका कुनै वनकरियाले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न अझ्ै सय वर्ष लाग्ला । सप्तकोशीको छालमा पुस्तौंदेखि हेलिंदै जीविका गर्ने माझ्ीले ओलम्पिकको पदक जित्ने सपना देख्नै सक्तैन । प्रशिक्षक राखेर बनावटी पोखरीमा पौडिन सिक्नेहरूले पदक जित्छन् ।
मुकारुङको परिवार तीन पुस्तादेखि संगीत र साहित्यमा सफल छ । पहिलो पुस्ताले पारिवारिक परम्पराबाट बाहिरिएर फरक क्षेत्रमा स्थापित हुन संघर्षका ‘धेरै पापड बेल्नु’ प¥यो । पछिल्लो पुस्ताकाले उनै अघिल्लो पुस्ताको दौराको फेर समातेर लड्खडाउँदै हिंड्न सिके । आफ्नै खानदानका अघिल्ला पुस्ताबाट पछिल्लो पुस्ताकालाई प्रेरणा, मार्गदर्शन र उत्प्रेरणाका सकेजति सबैखाले सहयोग गरे । मुकारुङ परिवारका डेढ दर्जन व्यक्ति साहित्य र गीत–संगीतका क्षेत्रमा स्थापित छन् ।
सपना र समय कहिलेकाहीं समानुपातिक र कहिलेकाहीं व्युत्क्रमानुपातिक हुँदोरहेछ । कति मान्छेहरू सपना देख्छन् पूरा गर्न सत्तैmनन् । आफूले देखेको सपना प्राप्त गर्न दौडिंदा दौडिंदै सिद्धिन्छन् । कोही थाक्छन् । कोही लड्छन्, कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी । कोही समयभर निदाउँछन्, निदाइरहन्छन् । सपना देख्दैनन् । ब्यूँझ्ंिदा आफू कतै छुटेको महसूस गर्छन् र बाँकी जीवन आफ्नो समय, समाज र सत्तालाई धिक्कार्दै कटाउँछन् ।
मेरा न बाजेले सपना देखे, न बाले । न मैले सपना देखें । न मलाई कसैले सपना देख्ने बनाउन सके । फलस्वरुप मैले कुनै
सपना देखिनँ । लाहुर जानु र भीरपाखा खोस्रिनुभन्दा पर पनि जीवन छ भन्ने पत्तो नपाई मेरो ऊर्जावान समयको अवसान भयो । मसँग समय थियो, सपना देख्न सकिनँ । कतिपयले सपना देख्ने समय नै पाएनन् । विश्वप्रकाश शर्माले १५ फागुन २०७२ को कान्तिपुर मा लेखे, “बीपीसँग सपना थियो, समय भएन । हामीसँग समय प्रशस्तै भयो तर सपना भएन ।” यहाँनेर अरनोल्ड ग्लासोको यो भनाइ उपयुक्त होला, “भविष्य जहिले पनि अकस्मात्, हामी सावधान हुनुभन्दा अगाडि नै आइपुग्छ ।”
म र मजस्ता शिक्षकहरूको अवस्था ठीक त्यस्तै छ । अबका विद्यार्थी अहिलेका शिक्षकहरू आफू विद्यार्थी हुँदाको भन्दा धेरै अगाडि छन् । उनीहरू विचार र दर्शनको सपना हैन, व्यवहारको सपना देख्न चाहन्छन् । किशोर विद्यार्थीलाई उनीहरूले देख्ने ‘फ्यान्टासी’ सपनाबाट यथार्थतिर डो¥याउनु जरूरी छ, तर कसले ! आफ्नै कुनै सपना नभएको, आफूले कहिल्यै सपना देख्न नसिकेको मान्छेले अरूलाई सपना देख्न सिकाउनु एकदम गाह्रो काम हो । धनकुटा क्याम्पस पढ्दा, हिउँदे बिदापछि जानेबेला बाले भनेका थिए, “राम्रो पढ्नू, ठूलो मान्छे बन्नू !” छोरो ‘ठूलो मान्छे’ होस् भन्ने बाको चाहना थियो । शायद सपना पनि । तर त्यो ‘ठूलो मान्छे’ के हो, उनले बताएनन्, होला उनलाई पनि थाहा थिएन । म धनकुटामा रहँदै बा कहिल्यै नफर्किने गरी बिदा भए । कहिलेकाहीं निद्राको सपनामा बालाई देख्छु र सोध्छु, “बा ! ठूलो मान्छे भनेको के हो ?”